i-CaseBoard - Kitendry Bluetooth misy bateria ho an'ny iPad 2, 3 ary 4 | Vaovao IPhone
Kitendry Bluetooth mandeha amin'ny bateria ho an'ny iPad
Tamin'ny alalàn'ny fivarotana ElectroMedia dia nahazo singa iray izahay i-CaseBoardny vaovao Kitendry bateria Bluetooth ho an'ny iPad hahafahanay mandinika izany ho anao rehetra.
Ny i-CaseBoard dia mpihazona iPad tonga miaraka amina a fitendry manontolo amin'ny espaniola ary bateria ivelany 4000mAh. Ity miaraka amin'ny endriny mitandrina dia mahatonga azy io ho famenon-javatra tonga lafatra hiara-hiasa amin'ny iPad toy ny hoe Macbook 10-inch.
1 Fametrahana keyboard
2 Fitaovana fitendry
3 Tolotra manokana ho an'ny mpamaky tranonkala
Raha vantany vao mivoaka ny boaty dia tsotra be ny fametrahana. Mila mampihetsika ny Bluetooth an'ny iPad fotsiny ianao fehezo ny kitendry vaovao ivelany. Vantany vao vita izany dia tsy maintsy apetrakao fotsiny eo amin'ny fonony keyboard ny iPad ary efa vonona ny handeha ny zava-drehetra.
Ny klavier dia vita amin'ny alimo sy plastika kalitao izay manome azy io tena mahaliana. Milamina ny lakileny ary tsindriana tsara mba hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny fanoratana amin'ny alàlan'ity kitendry ity.
Kitendry aoriana ho an'ny iPad
Araka ny hitantsika amin'ny sary teo aloha, ny aoriana Omena lavaka ny fonony fitendry mba hahafahana miditra amin'ny lakilen'ny iPad sy ny fakantsary. Ho fanampin'izay, manana fisokafana ihany koa izy ho an'ny Apple logo haseho, izay manome azy a fanampiny mikasika ny famolavolana amin'ny fitambarany.
Ny batterie ivelany 4000mAh dia mamela a Fahaleovan-tena 80 ora Raha mampiasa azy tsy tapaka ary mandritra ny 25 andro mahery ianao amin'ny fomba fitehirizana. Ny ora famandrihana dia 5 ora eo ho eo ary misaotra ny Port USB DC Out izay mampiditra anao dia afaka mameno ny iPad amin'ny batterie keyboard raha ilaina.
Amin'ny ambaratonga fiasa, tsara sy mora ampiasaina ny fampiasana azy. Ahafahanao manoratra mailaka (ny fitendry amin'ny Espaniôla mampiditra ny Ñ), zavatra tena ilaina raha te hampiasa iPad ianao hanoratanao mailaka na antontan-taratasy lava. Betsaka ny fitambarana fanalahidy Mac-style azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanalahidy SHIFT.
Kitendry Bluetooh amin'ny lafiny iPad
Tolotra manokana ho an'ny mpamaky tranonkala
Farany, lazao fa ny fitendry dia mifanaraka amin'ny iPad 2,3, 4 ary 49,95. Ny vidiny ankehitriny dia nahena hatramin'ny € 79,90 (talohan'ny € XNUMX) ary azonao atao ny mividy azy ity amin'ny Ity rohy ity. Ho an'ny mpamaky rehetra an'ny Vaovao IPad misy tolotra fihenam-bidy manokana € 4. Mba hahazoana ny fihenam-bidy dia mila mampiditra ny lahatsoratra fotsiny ianao actualitasipad ao amin'ny habakabaka natokana ho an'ny tapakila fihenam-bidy rehefa mametraka ny kaontinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » i-CaseBoard, fitendry Bluetooth misy bateria ho an'ny iPad
Kamyth dia hoy izy:
Fa ohatrinona ny lanjany? Ny tsy hitako ao amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy ary tena zava-dehibe, farafaharatsiny ho ahy, ny hitondrako ny ipad mankany amin'ny oniversite
Valiny tamin'i Kamyth
Anna Corral Gavilán dia hoy izy:
Valiny tamin'i Anna Corral Gavilán
Tamin'ny 03 martsa 05, tamin'ny 2013:15 hariva, nanoratra i "Disqus":
Diogo dia hoy izy:
Ity fitendry ity dia misy fidirana usb ary azontsika ampiasaina ve izy io hamakiana azy? Tena tsara ve ity fitendry ity, amin'ny versao portogey ve ity?
Mamaly an'i Diogo
Tsia, tsy maintsy handefasana fitaovana hafa fotsiny izany. Mikasika ny Portiogey, tsara kokoa ny mifandray mivantana amin'ny fivarotana.
Tamin'ny 03 martsa 05, tamin'ny 2013:20 hariva, nanoratra i "Disqus":
Israel nina dia hoy izy:
Moa ve ny slot USB manompo tbn hampiditra pendrive?
Mamaly an'i Israel nina
Diso namboarina ny klavier, tsy azoko ny ene ary ireo tandindona sasany dia tsy mifanaraka amin'ny lakile misy azy ireo.
John jo dia hoy izy:
fitaovana lehibe, tena azo ampiharina, volavolaina mafy, na dia tsy dia lafo loatra aza (mitovy amin'ny 'tombana' mazàna an'ny Apple amin'ny sasany amin'ireo fitaovany).
Valiny tamin'i Juan Jo
Mophie dia manangana ny GoPro Hero ho an'ny iPhone